အနုမြူစက်ရုံကြီးပေါက်ကွဲမှုကျေးဇူးကြောင့် လှပတဲ့ကမ္ဘာငယ်လေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာ!!!! - JAPO Japanese News
ကြာ 06 Feb 2020, 17:23 ညနေ
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ငလျင်၊ ဆူနာမီ တို့ရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့် ဖူကူရှီးမားစီရင်စုမှာရှိတဲ့ အနုမြူဓါတ်စွမ်းအားပေးတဲ့ စက်ရုံကြီး မတော်တဆဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့ အဲ့ဒီမတော်တဆမှုကြောင့် သဘာဝတရားကြီးက အရင်းအတိုင်းပြန်ပြီးလှပလာခဲ့ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေက လူသားတွေထက်စာရင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွကို ရွေးချယ်ခဲ့တာများလား?
၂၀၁၁ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ၁၁ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် သမိုင်းတစ်ခုတင်ကျန်စေခဲ့တဲ့ အားပြင်းတဲ့ငလျင်နဲ့၊ သူရဲ့ အဖော်ဖြစ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးတွေက ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှမထောက်ဘဲ အရှေ့မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းတစ်ခုလုံးကို ဖျတ်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့အားလုံး အဲ့ဒီနေ့ကို မှတ်မိနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲမှာ အကြီးဆုံးပျက်ဆီးယိုယွင်းမှုကိုပြပါလို့ ဆိုရင်တော့ ဖူကူရှီးမားမှာရှိနေတဲ့ အနုမြူဓါတ်ပေါင်းဖို စက်ရုံကြီးရဲ့ မတော်တဆမှုလို့ပဲ ပြောရပါမယ်။
ဒီလိုမတော်တဆဖြစ်ပွားပြီး ဘယ်သူမှသွားလို့လည်းမရ၊ ပေါက်ကွဲမှုတွေကလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေက တခြားနေရာတွေကိုပြောင်းရွေ့ကြကုန်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကိုရော တွေ့မိကြပါသလား?
လက်ရှိအချိန်အထိကတော့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ယိုစိမ့်မှုတွေ မရှိသေးတဲ့ အဲ့ဒီနေရာကို သွားဖို့တားမြစ်ထားတာ အခုဆို ၁၀ နှစ် နီးပါးတောင်ရှိပါတော့မယ်။
အဲ့ဒီဧရိယာ ကအခုဘာတွေထူးခြားမှုရှိနေပြီးလဲဆိုတာကို သိဖို့ရန်အတွက် အဝေးကနေ remove control camera အလုံး ၁၂၀ နဲ့ တပ်ဆင်ပြီး စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာရဲ့ မနီးမဝေးမှာ ကမ္ဘာငယ်လေးတစ်ခုကို ရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါအုံး!!!
အပင်တွေဆိုတာကလည်း သန်သန်မာမာနဲ့ကြီးထွားနေပြီးတော့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေဆိုတာကလည်း အဲ့ဒီဧရိယာမှာ သွားပြီးတော့ နေထိုင်ကျက်စားနေကြပါပြီ။
ကန့်သတ်ထားတဲ့ အဲ့ဒီဧရိယာက အပိုင်း (၂) ပိုင်းလို ဖြစ်နေတယ်။
ပထမက လူသွားလူလာ မရှိတဲ့ ကန့်သတ်နယ်မြေဖြစ်ပြီး၊
ဒုတိယက လူသွားလာဖို့ ခွင့်မပြုထားတဲ့ တားမြစ်နယ်မြေပေါ့ !!!!!!
လုံးဝကို ကင်မရာတွေနဲ့ လိုက်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ တွေ့လိုက်ရတာတွေကတော့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေပါပဲ။ အဲ့ဒီအထဲမှာမှ ဝက်ဝံငယ်လေးတွေက အများဆုံးပါ။
အဲ့ဒါထက်ပိုပြီး အံ့သြစရာကောင်းတာက ကန့်သတ်နယ်မြေထက်၊ လုံးဝမသွားရဆိုတဲ့ တားမြစ်နယ်မြေမှာ သူတို့ကမိသားစုတွေနဲ့တောင်နေထိုင်နေကြပါပြီ!!! (သဘောကျလျက် ရယ်သည်!!!)
တားမြစ်နယ်မြေမှာနေထိုင်တာ ၂ ဆကြီးများတောင် ပိုများနေပါတယ်တဲ့။
အဲ့ဒီဧရိယာမှာ အရင်က ပုံမှန်လူတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ပမာဏနဲ့နှိုင်းယှဥ်ကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့ လာရောက်နေထိုင်မှုက ၃ ဆတောင်ရှိလာပါတယ်။
အဲ့ဒီမတော်တဆဖြစ်သွားတဲ့ အနုမြူစက်ရုံကြီးရဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်တဲ့အခါ အမျိုးမျိုးသော တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း အန္တရာယ်ရှိလို့ တားမြစ်ထားတဲ့နယ်မြေမှာမှ သူတို့တွေပိုအနေများတယ်ဆိုတဲ့ ရလဒ်ကိုရရှိလိုက်တာပါ။
တိရစ္ဆာန်လေးတွေကတောင် လူတွေနဲ့အတူနေထိုင်ခြင်းကိုသိပ်သဘောမကျဘဲ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွလှိုင်းတွေနဲ့ နေထိုင်ရတာကို ပိုပြီးသဘောကျနေသယောင်ယောင် ရှိပါတယ်။
ရေဒီယိုသတ္တိကြွတွေက တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက် မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေကို ပေးနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောနေကြပေမဲ့၊
ကင်မရာထဲက ဓါတ်ပုံတွေမှာတော့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွရဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တာတို့၊ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေတို့ လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ တကယ်က အဲ့ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရှိလာမယ်လို့ ထင်နေကြတာပါ။
စာဖတ်သူတို့လည်းတွေ့ဖူးကြမယ်လို့ထင်တယ်။ Jurassic Park ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ လေ့လာသူတွေက ပြောထားပါတယ်။
“ အသက်ရှင်ရဖို့ နည်းလမ်းမရရအောင်ရှာမယ်”
အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုပဲ ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေက မတော်တဆမှုဖြစ်သွားတဲ့ ဖူကူရှီးမားမြို့ရဲ့ အနီးအနားမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ လူတွေကိုအန္တရာယ်မပြုတတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေက ပိုပြီးများတယ်လို့ သုတေသနပညာရှင်တွေဆီကနေသိရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလိုအများကြီးရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေက လူသားတွေရဲ့ လောဘ၊ အတ္တတွေကြောင့် အလွန်အမင်း ငါးဖမ်းခြင်းတွေခံရတယ်။ သစ်တွေခုတ်ပြီး သစ်တောတွေကို ပြုန်းတီးပစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့တွေအတွက် နေစရာနေရာမရှိတော့တာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
မျိုးသုဥ်းပျောက်ကွယ်တော့မယ့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို ကယ်တင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ကမ္ဘာမှာရှိပေမဲ့၊ လက်တွေ့မှာလိုအပ်တာက အဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။
“ အမှန်တကယ်ကတော့ လူသားတွေသွားရောက်အခြေမချဖို့ နေရာတွေသတ်မှတ်ပြီး အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက် လွတ်လပ်စွာနဲ့နေထိုင်ခွင့်ပဲ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ “
မတော်တဆမှုဖြစ်သွားတာကြောင့် တားမြစ်နယ်မြေအဖြစ်ပိတ်ထားပြီး လျစ်လျူရှုထားဖို့မဟုတ်ဘဲ၊ အကောင်းဘက်ကနေပြန်ကြည့်ရင်
အဲ့ဒီနေရာကို အပင်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေဆီ ပြန်အပ်လိုက်တာက ပိုမကောင်းဘူးလာဆိုပြီး လူသားတိုင်းစဥ်းစားမိဖို့ လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော်!!!
စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်လိုထင်မိပါသလဲ!!! တွေးမိတာလေးတွေရှိရင်လည်း ပြောသွားခဲ့အုံးနော်!!!!
တို့ဖူးကို အနုပညာဖြင့် ခံစားသုံးဆောင်ရန် !!!!
Kao dorayaki မျက်နှာမုန့် ???